ထိုင်း – Page2– Myanmar Live
ထိုင်းနိုင်ငံအနှံ့ ည၁၀ နာရီမှ မနက် ၄ နာရီထိ ညမထွက်ရကာဖြူးအမိန့်ထုတ်ပြီ
April 2, 2020 April 2, 2020 - by peeraporn y.
ထိုင်းကိုဗစ်ရောဂါအခြေအနေနှင့် အရေးပေါ်သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနတွင် မနက် ၉.၃၀ ကကျင်းပခဲ့တဲ့ အစည်းဝေးတွင် ဝန်ကြီးချုပ်ကိုင်တိုင်တက်ရောက်ပြီး ယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ထိုင်းနိုင်ငံအနှံ့အရေးပေါ်ကာဖြူးအမိန့်ဖြင့် ည …
ာထဲဝင်ခွင့်မပေး၍ ထိုင်းမှပြန်သွားသည့်လုပ်သား သစ်ပင်ပေါ်တဲထိုးပြီး ၁၄ ရက် သီးခြားနေထိုင်
March 31, 2020 March 31, 2020 - by peeraporn y.
ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိ မြဝတီ-မဲဆောက် အမှတ်(၂)ချစ်ကြည်ရေးတံတားမှ တဆင့်နေရပ်ပြန်သွားသည့် ထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သားများသည် ဇာတိရွာသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးနောက်တွင် …
Covid 2019 အကျပ်အတည်းကြောင့် အထောက်အထားသက်တမ်းတိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြောင်းလဲခြင်း
၁။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးများ၊ ဘန်ကောက်မဟာမြို့တော်အတွင်းရှိ မြို့နယ်ရုံးများ (District Office) နှင့် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးများသည်အထောက်အထားသက်တမ်းတိုးခြင်းကို OSS စင်တာတွင်ပိတ်သိမ်းပြီး …
ကိုဗစ်-၁၉ အကြပ်အတည်းကြောင့် OSS စင်တာများ ခေတ္တရပ်နားပြီးပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မည်
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ပတ်စပို့ဗီဇာသက်တမ်းဆက်ခြင်းများကို ကိုဗစ်-၁၉ ဗိုင်းရပ် ပျံ့နှံ့မှုဟန့်တားရန်နှင့်လုပ်သားများ ၄င်းကပ်ရောဂါမှ အန္တရာယ်ကင်းစေရန်အတွက် (One Stop Service …
Covid 2019 ကပ်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်ပြီးထိုင်းအစိုးရနှင့် မြန်မာသံရုံးအပါအဝင်သတိပေးစာထုတ်ပြန်
March 17, 2020 March 17, 2020 - by peeraporn y.
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကိုဗစ်-၁၉ ဗိုင်းရပ် ကူးစက်ပြန့်ပွားနေမှုကြောင့် ထိုင်းရောက်ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများကို မြန်မာသံရုံးမှယခုကိုသတိပေးကြေညာစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ …
မြန်မာနှင့်ရသည့်ထိုင်းအမျိုးသမီး နောက်မီးလင်းတာကြောင့်ပုစိန်ဖြင့်ထုခံရ !
March 10, 2020 March 10, 2020 - by peeraporn y.
စမွတ်ပရကန်ခရိုင်ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် အလုပ်လုပ်နေသည့် ထိုင်းအမျိုးသမီးနှင့် အိမ်ထောင်ကျနေသူ အသက် ၃၉ နှစ်အရွယ် မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးက ထိုင်းအမျိုးသမီးဟာ …
လူသတ်မှုတရားခံပြေး တရုတ်နိုင်ငံသားလေးဦးကို မြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးပြီး ထိုင်းဘက်ကိုလွှဲပြောင်း
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလူသတ်မှုကျူးလွန်ပြီးထွက်ပြေးလာသည့် တရုတ်နိုင်ငံသားလေးဦးကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖမ်းဆီးရမိပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ သို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်က ထိုင်းနိုင်ငံ …
March 5, 2020 March 5, 2020 - by peeraporn y.
၂ဝ၂ဝ မတ်လ ၂ ရက်နေ့က ခွန်ကန်ခရိုင်မှ ချင်းမိုင်သို့အငှားတက္ကစီငှားပြီး လိုက်ပါလာတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီး အသက် ၃၅ …
၂ဝ၂ဝ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့က တရားမဝင် ရွှေ့ပြောင်းအိမ်အကူမလေးတစ်ဦးကို အိမ်တွင်းမှအိမ်ပြင် ထွက်ခွင့်မပေးဘဲ နှစ်ရှည်ချုပ်နှောင် ခိုင်းစေခဲ့တဲ့ …